Akụkọ anyị | Zhejiang Liper Lighting Technology Co., Ltd.
<img elu = "1" obosara = "1" ụdị = "ngosi: ọ nweghị" src = "https://www.facebook.com/tr?id=2735146430138249&ev=PageView&noscript=1"/>
Ikanam Iju Mmiri
Ikanam Panel Ìhè
Ìhè - Na -enwu enwu, na -ekwe nkwa
Ị maghị ihe ga -eme ma ọ bụrụ na ìhè adịghị n'ụwa
Ụmụ mmadụ ka na -achọgharị n'ọchịchịrị
Ọchịchọ na ịchụso ọkụ nwere ike ịlaghachi na akụkọ ifo ndị Gris - ire ​​ọkụ nke Prometheus
Na Ọktoba 21 1879
Edison tụgharịrị akụkọ ifo ka ọ bụrụ eziokwu, wetara ezigbo ọkụ
Owepụtara oge ọhụrụ maka akụkọ sayensị na mmadụ niile
N'otu oge ahụ, akụkọ Liper na -abịa
N'ịgbaso ụdị nrụpụta siri ike na nke dị elu, ụlọ ọrụ ahụ na -etinye aha na ịdị mma dị oke mkpa. Ngwaahịa niile bụ isi agafeela IEC, CB, CE, GS, EMC, TUV, EMC, LVD na ERP asambodo mba ụwa yana asambodo mba CQC na CCC China. A na-eduzi mmepụta niile dabere na ISO9001: 2000 International Quality System.The Company eguzobela ụlọ ọrụ teknụzụ R&D nke mba na ụlọ nyocha. Ọ nwere ndị otu R&D pụrụ iche wee nweta ikike dị iche iche, gụnyere akwụkwọ ikike iri na abụọ maka ihe mepụtara, 100 patent maka ịba uru, yana akwụkwọ ikike 200 maka imewe. Site na mmepụta, R&D ruo ihe ọhụrụ, ọ bụrụla onye isi ụlọ ọrụ ọkụ wee ree ụwa niile, ngwaahịa ya na -enwe ezigbo aha n'etiti ndị ahịa. Onye ndu ụlọ ọrụ, esorola onye isi ala China gaa mba Europe ọtụtụ oge ma nwee mkparịta ụka azụmaahịa iji kpaa maka mmepe ụlọ ọrụ ahụ.
Dị ka ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ na -ewu ewu nke nwere akara ama ama, anyị bụ otu n'ime ndị ọkpụkpọ kachasị mkpa na -eduga ntụzịaka nke ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ China .Dabere na ihe niile dị n'elu, anyị nwetara ụlọ ntu ika isi na ngosipụta canton wee nọrọ ihe karịrị afọ 10.
Na 2015, Nke a na -abịa ohere.
Site na iru mmekorita dị mkpa na Disemba 2015 mgbe ha bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nkwekọrịta dị n'etiti ndị isi ụlọ ọrụ German na ndị nnọchi anya onye nnọchi anya China na Germany, Germany Liper Electric Co., Ltd na anyị emeela nkwado gburugburu, na-akara akara ọkwa ọhụrụ nke mmepe Liper. Ụgbọ elu ụgbọelu na ụlọ ọrụ ọkụ mba ụwa na -amalite ịkwọ ụgbọ mmiri ......
Anyị ga-ejikọ teknụzụ kacha elu nke ụlọ ọrụ German ma melite mmụọ ndị German ka ha wee nwee ọmarịcha arụmọrụ yana mmepe na-adigide, iji nye usoro ọkụ ọkụ agbakwunyere klaasị ụwa mbụ maka ọkụ azụmaahịa ụwa, ọkụ ime ụlọ na ọkụ n'èzí. Ọ bụghị naanị ndọtị nke usoro atụmatụ nke akụkụ abụọ ahụ, mana usoro imekọ ihe ọnụ ọhụrụ na atụmatụ ga-eweta mmetụta dị ukwuu na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ LED.
Anyị emeela otuto a na-apụghị ịgụta ọnụ, mana nke ọhụrụ, ka mma, ma maa mma bụ ebumnuche anyị anaghị akwụsị akwụsị.
Liper na-agba mbọ ịkwalite ndụ ndụ akwụkwọ ndụ, nkwekọ na obere carbon, na-eke ụwa ọkụ dị elu maka ụwa niile, na-enwu kwa ụbọchị maka mmadụ niile!
Ìhè egbugbere ọnụ na -efesa n'ala na -acha odo odo wee mee ka ndị mmadụ nwee ekele maka kristal nke teknụzụ sayensị na nka.
Egbugbere ọnụ na -eme ka ụwa nwekwuo ike ịchekwa ọkụ !!!
Enwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị?
Biko hapụ anyị ozi, anyị ga -alaghachikwute gị ASAP.
IP 65 DIGHLIGHT Nhọrọ zuru oke maka Parkin ...
Ike, ịhụnanya, ọbụbụenyi sitere na mma ...
Copyright - 2020-2021: Edebere ikikere nile. Nkwado ndị teknuzu:
<img elu = "1" obosara = "1" ụdị = "ngosi: ọ nweghị" src = "https://www.facebook.com/tr?id=273965424400903&ev=PageView&noscript=1"/>
<img elu = "1" obosara = "1" ụdị = "ngosi: ọ nweghị" src = "https://www.facebook.com/tr?id=3723996497698375&ev=PageView&noscript=1"/>